Futuracha Pro, nooc asal ah oo isbeddelaya markaad qorto | Abuurista khadka tooska ah
Laga soo bilaabo Giriiggii hore, fikradda qaab qorista waxaa loo maareeyay sidii farshaxankaas oo matali kara qoraallada, iyada oo loo marayo xulashada farta iyo shaqooyinka daabacaadda
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loogu magac daro qorista farqiga inkasta oo qeexitaankeeda lagu muujiyay sadarka hore, maanta waxaan ka hadli doonnaa 4 nooc oo jira.
1 Noocyada kala duwan ee qoraalka
1.1 Tafatirka qaab qoraalka
1.2 Qaab qorista hal abuurka ah
1.3 Moodhadh yar yar ama nooc faafaahin ah
1.4 Muuqaaleedka makro
2 Futuracha Pro: Nooca cusub
3 Waxay wax ka beddeleysaa qaabka aad wax u qorayso!
4 Dad badan ayaa yaqaana Futuracha!
Noocyada kala duwan ee qoraalka
Tafatirka qaab qoraalka
Tani waxay isu keentaa su'aalaha qoristaáficas la xiriira qoysaska, cabirka xarfaha, meelaha udhaxeeya xarfaha iyo ereyada
Qaab qorista hal abuurka ah
Tani waxay tixgelineysaa isgaarsiinta sida sarbeeb muuqaal ah, halkaas oo qoraalka uusan kaliya ku shaqeyneyn luqad ahaan iyo halka mararka qaarkood si muuqaal ah loogu matalayo, sidii inuu yahay sawir.
Moodhadh yar yar ama nooc faafaahin ah
Tan waxaa lagu dalbaday markii ugu horreysay walxaha sida xarfaha, booska u dhexeeya xarfaha, erayga, booska u dhexeeya ereyada, xariijinta xarriiqda iyo safka.
Waxay diiradda saareysaa qaabka, qaabka warqadda, iyo jirka xarafka.
Futuracha Pro: Nooca cusub
Horeba waa arrin xariifnimo iyo tiknoolajiyad badan oo loogu talagalay isbeddelladan cusub ee lagu horumarinayo markay matalayaan qoraallada. Bini aadamku had iyo jeer waxaan dooneynaa inaan siino shaqsi ahaan iyo taabasho dhab ah wax kasta oo aan sameyno iyo wixii aan la qabanno Futuracha, ka reebi mayno
Marka loo eego waxa laga heli karo websaydhka, qaabka loo aqoonsaday Futuracha wuxuu la socdaa “nooca fontón lagu qurxiyey waxyoonayón farshaxan-démuusikada lama filaanka ah: baranbaro Caribbean-ka".
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa wax yar oo aan la fahmi karin si loo fahmo turjumaadaas qof garanaya fikradda Futuracha markii ugu horeysay, laakiin waqtiga iyo muuqaalka, nuxurka abuuritaankiisa ayaa aad loo fahmay.
Waxay wax ka beddeleysaa qaabka aad wax u qorayso!
Abuuraha wuxuu sheeganayaa in kolba qoraalo badan oo soo baxa ay soo baxayaan, qoraalkanía ayaa ku habboon qaabka bandhiggaón indhaha ka farxiya oo matalaya fikradda ugu muhiimsan ee nooca qoraalka. Iyo sida haddii aysan taasi ku filnayn, fikradda shakhsiga ah ee abuuraha qudhiisu weli wuxuu kaa dhigayaa adigoon hadli karin: «Futuracha, ma garanayoóWaxay leedahay qurxiyo laakiin noocyo badan oo iyaga ka mid ah oo laga kala xusho. Hal abuurka ag dhig waxqabadka, ciyaarta ka hor jihooyinka, iyo tijaabada.ón buugaagta ka hor«.
Hadalkan hore, milkiilaha iyo qoraaga saxeexa qoraalka, wuxuu isbarbar dhigayaa noocyo kale oo kadambeeya tartanka wuxuuna ogeysiinayaa in mashruuciisa Futuracha runti uu dhab yahay.
Dad badan ayaa yaqaana Futuracha!
In ka badan 120 waddan, tan nooc cusubía Horey ayaa loo soo dejiyey oo maskaxda lagu hayaa, waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan fikradan qorista ayaa ah fursad dib loogu saxo waxyaabaha aad ka kooban tahay sida aad u qoreyso ama aad u tafatirto. Si kastaba ha noqotee, wax walbaa kuma joogsadaan halkaas! Waxaa horay u jiray codsiyo badan oo la aqoonsan yahay iyo tiro aad u tiro badan oo logos ah oo bilaabay inay la shaqeeyaan naqshadahooda Futuracha oo hadda leh astaan ​​gaar ah mahadsanid qoraalkan.
Dadka ugu hal abuurka badan ayaa ah kuwa sida ugu badan uga faa’iideysta qalabkan, shaki la’aan. Waxaa tixgeliya dad badan oo caan ah oo naqshadeeyayaasha garaafka, mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loo qaabeeyo qoraalkaaga oo waxaad siisaa macno is-waafajin shakhsiyeed oo leh weedh kasta oo aad qorto.
Ha joogin dhadhamin la'aan! Sikastaba, hadii aysan aheyn hiwaayaddaada inaad wax kuqorto xarfaha kala geddisan, haka labalaaban inaad fariisato oo aad u maleyneyso in mar uun aad ubaahan karto taasna waa waxaa ku jira adeegeyaalínea haddii ay dhacdo maalin maalmaha ka mid ah oo aad rabto inaad halkaas ku joojiso oo aad wakhti yar ku disho. Laakiin runtu waxay tahay iyadoo qaab-qoraalkan cusub, ay sii kordhayaan fikradaha kala duwan ee isku dhafan.
Futuracha waa la arkaa meel kasta, sida ugu badan ee laga soo bilaabo maalintaas ugu horreysay ee abuuraheeda loo xilsaaray inuu u sameeyo nooc ka kooban maaddo iyo la waxyoodayó laba baranbaro Caribbean Waxaan daawanayay fasal sawir ah. Waxaa dhiirigaliyay "anteenooyinka iyo ciribta cagihiisa.«
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Futuracha Pro, nooc asal ah oo isbeddelaya markaad qorto
36 Maalmaha Nooca: Isu Soo Wada Duub Dhamaan Naqshadayaasha